ရုပျရှငျဝါသနာအိုးတို့အတှကျ ဘယျရုံမှာ ဘာကားတှပွေနသေလဲ(ရုပျသံ) - DVB
Lead Story Movie Crazy ရုပျသံ
ရုပျရှငျဝါသနာအိုးတို့အတှကျ ဘယျရုံမှာ ဘာကားတှပွေနသေလဲ(ရုပျသံ)
အပတျစဉျပုံမှနျတငျဆကျနကေဖြွဈတဲ့ Movie Crazy အစီအစဉျကနေ မွနျမာနိုငျ ငံနဲ့ နိုငျငံတကာမှာ ရုံတငျပွသတော့မယျ့၊ ရုံတငျပွသနဆေဲဖွဈတဲ့ ကောငျးနိုးရာရာ ရုပျ ရှငျဇာတျကားတှေ အကွောငျးကို ရှေးခယျြဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
မူဗီခရဇေီတှကေို ပထမဆုံးမိတျဆကျပွောပွပေးခငျြတဲ့ ရုပျရှငျကတော့ ပူလဈဇာ ဆုရ စာအုပျတအုပျကို ရုပျရှငျအနနေဲ့ ရိုကျကူးပုံဖျောလိုကျတဲ့ The Goldfinch !
ဟောလိဝုဒျ ဒရာမာအမြိုးအစားရုပျရှငျ ပရိသတျတှေ အကွိုကျတှကွေ့မယျ့ ဒီ ကားကိုတော့ Warner Bros. Pictures ကနေ ဖွနျ့ခြိသှားမှာဖွဈပွီး အိုငျးရဈချြ ရုပျရှငျ ဒါရိုကျတာ John Crowley က ရိုကျကူးပုံဖျောပေးထားတာပါ။
ဒီရုပျရှငျကားဟာ ၂၀၁၄ ခုနှဈ ပူလဈဇာဆုရ အမရေိကနျစာရေးဆရာ Donna Tartt ရဲ့ The Goldfinch စာအုပျကို ရုပျရှငျအနနေဲ့ ပုံဖျောရိုကျကူးထားတာ ဖွဈပါ တယျ။ The Goldfinch ဆိုတဲ့ပနျးခြီကားတဈခပျြကို အကွောငျးပွုပွီး နယူးယောကျ-မနျဟကျတနျမှာ နထေိုငျတဲ့ လူငယျတယောကျရဲ့ ဘဝအတှကျ ရုနျးကနျလှုပျရှားတဲ့ အ တှအေ့ကွုံနဲ့ ဘဝအပျေါ အနုပညာရဲ့ သကျရောကျပုံတှေ ရေးဖှဲ့ထားတာပါ။ Theo ဆိုတဲ့ အဲဒီလူငယျလေးရဲ့ ဘဝနောကျကွောငျးကတော့ သူ့ရဲ့ အသကျ ၁၃ နှဈအရှယျမှာ မကျထရိုပိုလီတနျအနုပညာပွတိုကျ ဗုံးပေါကျကှဲမှုမှာ မိခငျဖွဈသူကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယျ။ အဲဒီနောကျမှာတော့ သူ့ရဲ့ ဘဝဟာ တကယျ့ကို ဇောကျထိုးမိုးမြှျော ဖွဈသှားခဲ့ရတယျ။ ဒီနောကျမှာ မိခငျအတှကျ အမှနျတရားကို ဘယျလိုရှာဖှမေလဲ၊ ဘယျလိုခြိတျ ဆကျမှုတှနေဲ့ ရိုကျကူးပုံဖျောထားမလဲဆိုတာကို ဒီကားထဲမှာ ရှုစားကွရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကားထဲမှာတော့ ဟောလိဝုဒျနာမညျကွီး သရုပျဆောငျမငျးသားမငျးသမီး တှဖွေဈကွတဲ့ Ansel Elgort ၊ Sarah Paulson ၊ Luke Wilson ၊ Jeffrey Wright ၊ Nicole Kidman ၊ Ashleigh Cummings စတဲ့ သရုပျဆောငျတှေ ပါဝငျထားကွတာ ဖွဈ ပါတယျ။
IMDb မှာ Rating 6.7 အထိ ရရှိထားခဲ့တဲ့ ဒီရုပျရှငျကားကို နာမညျကွီး ရုပျရှငျပှဲ တျောတခုဖွဈတဲ့ Toronto International Film Festival မှာ ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလ ၈ ရကျနကေ့ ပွသခဲ့ပွီး ခြီးကြူးမှုတှလေညျး ရရှိထားပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကားထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ တခြို့ဇာတျဝငျခနျးမွငျကှငျးတှေ၊ ပွကှငျးပွကှကျတှေ၊ ပွောစကား Dialog တှကေ အသကျ ၁၇ နှဈအောကျ ကလေးငယျတှေ ကွညျ့ရှုဖို့ မသငျ့တျောတာမို့ ဒီကားကို ကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ မိဘအုပျထိနျးသူခှငျ့ပွုခကျြ Guideline နဲ့မှ ကွညျ့ရှုသငျ့တဲ့ Restricted R အဆငျ့ သတျမှတျထားပါတယျ။
ဘတျဂကျြအမရေိကနျဒျေါလာသနျး ၄၀ အကုနျအကခြံရိုကျကူးထားတဲ့ ဒီရုပျရှငျ ကားကိုတော့ Box Office မှာ ရုံတငျပွသမယျ့ ပထမသီတငျးပတျမှာတငျ ဝငျငှအေမရေိ သနျဒျေါလာ ၈ သနျးကနေ ၁၂ သနျးကွား ရရှိနိုငျမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။
ကွာမွငျ့ခြိနျ ၁၄၉ မိနဈရှိတဲ့ ဒီရုပျရှငျကားကိုတော့ လာမယျ့ စကျတငျဘာ ၁၃ ရကျနေ့ ရုံတငျပွသတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
နောကျထပျ မိတျဆကျပွောပွပေးခငျြတဲ့ ရုပျရှငျကတော့ ဝါရငျ့အဆိုတျော သ ရုပျဆောငျမငျးသမီး ဂနြီဖာလိုပကျဇျနဲ့ အာရှနှယျဖှားသရုပျဆောငျမငျးသမီး ကှနျးစတနျ့ဝူ တို့ ခေါငျးဆောငျပါဝငျထားကွတဲ့ Hustlers !
ဖွဈရပျမှနျဒရာမာဇာတျမွူးရုပျရှငျအမြိုးအစားဖွဈတဲ့ ဒီရုပျရှငျကားကိုတော့ အမေ ရိကနျအမြိုးသမီး ရုပျရှငျဒါရိုကျတာ Lorene Scafaria က ရိုကျကူးပုံဖျောပေးထားတာ ဖွဈပွီး STX Films ကနေ ဖွနျ့ခြိပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီဇာတျလမျးဟာ ၂၀၁၅ ခုနှဈက နာမညျကြျော နယူးယော့ချမဂ်ဂဇငျးမှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့ ဆောငျးပါးရှငျ Jessica Pressler ရဲ့ “The Hustlers at Scores” ဆိုတဲ့ ဆောငျးပါးကို ရုပျရှငျအနနေဲ့ အသကျသှငျးပုံဖျောလိုကျတာပါ။
၂၀၀၀ ပွညျ့လှနျကာလတှတေုနျးက နယူးယော့ချစီးတီးမှာ နထေိုငျခဲ့တဲ့ တိုငျးတပါးမှ အမြိုးသမီးအကအဖှဲ့တခုဟာ သူတို့အပျေါ ငှကွေေး၊ အရကျတို့ကွောငျ့ နှိပျ စကျအနိုငျကငျြ့ခဲ့ကွတဲ့ ငှားရမျးသူ သူဌေးတှဆေီကနေ ဘဏျခရကျဒဈကတျတှေ ယူ ဆောငျခဲ့ကွပွီး ကလဲ့စားခကြွေတဲ့အကွောငျးတှကေို ဇာတျအိမျတညျရိုကျကူးထားခဲ့တာ ပါ။
စှဲမကျဖှယျ ကောကျကွောငျးနဲ့ ညှို့အားပွငျးအလှကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ အဆိုတျော သရုပျဆောငျမငျးသမီး ဂနြီဖာလိုပကျဇျနဲ့ မကွာသေးခငျကမှ Crazy Rich Asians ရုပျ ရှငျကားနဲ့ အောငျမွငျလာခဲ့သူ အာရှနှယျဖှားသရုပျဆောငျမငျးသမီး ကှနျးစတနျ့ဝူတို့ရဲ့ ခုလိုပေါငျးစညျးမှုဟာ ပရိသတျတှအေတှကျတော့ စိတျဝငျစားစရာ ဖွဈနခေဲ့တာပါ။
ဒီကားထဲမှာ သူတို့ ၂ ဦးအပွငျ တခွားဟောလိဝုဒျသရုပျဆောငျတှဖွေဈကွတဲ့ Julia Stiles၊ Keke Palmer ၊ Lili Reinhart ၊ Lizzo နဲ့ အဆိုတျော Cardi B စတဲ့ သ ရုပျဆောငျတှလေညျး ပါဝငျထားကွတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကားရဲ့ အထူးပှဲပွသမှုကိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလ ၇ ရကျနကေ့ နာမညျကွီး ရုပျရှငျပှဲတျောတခုဖွဈတဲ့ Toronto International Film Festival မှာ ပွု လုပျခဲ့ပွီး ခြီးကြူးမှုတှလေညျး ရရှိထားခဲ့ပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကားကိုတော့ ဘတျဂတျြအမရေိကနျဒျေါလာသနျး ၂၀ နဲ့ ၃၀ ကွား အ ကုနျအကခြံ ရိုကျကူးထားပွီး Box Office မှာတော့ ရုံတငျပွသမယျ့ ပထမ သီတငျးပတျ မှာတငျ ဝငျငှအေမရေိကနျဒျေါလာ ၂၄ သနျးကနေ ၂၆ သနျးကွား ရရှိနိုငျမယျလို့ ခနျ့ မှနျးထားပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကားထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အဖျောအခြှတျဇာတျဝငျခနျးတှေ၊ ပွ ကှငျးပွကှကျတှနေဲ့ ပွောစကား Dialog တှကေ အသကျ ၁၇ နှဈအောကျ ကလေးငယျတှေ ကွညျ့ရှုဖို့ မသငျ့တျောတာမို့ ဒီကားကိုကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ မိဘအုပျထိနျးသူ ခှငျ့ ပွုခကျြနဲ့မှ ကွညျ့ရှုသငျ့တဲ့ Restricted R အဆငျ့ သတျမှတျထားပါတယျ။
ယူကြုဘျပျေါမှာတော့ ဒီရုပျရှငျကား Trailer ဟာ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုကွတဲ့ အ ကွိမျရေ သနျးနဲ့ခြီ ရှိနခေဲ့တာဖွဈပွီး ပရိသတျတှကွေားမှာ ရပေနျးစားနခေဲ့တာပါ။
ကွာမွငျ့ခြိနျ မိနဈ ၁၁၀ ရှိတဲ့ ဒီရုပျရှငျကားကိုတော့ လာမယျ့ စကျတငျဘာလ ၁၃ ရကျနမှေ့ာ ရုံတငျပွသတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
နောကျထပျမိတျဆကျပွောပွပေးခငျြတဲ့ ရုပျရှငျကတော့ မွနျမာအခဈြဒရာမာ ရုပျ ရှငျကားတကားဖွဈတဲ့ ရူးအောငျခဈြမယျ့လူ !
ဒီကားကိုတော့ ရှစေငျဦး ရုပျရှငျထုတျလုပျရေးက တငျဆကျလိုကျတာဖွဈပွီး လှနျးထားထားရဲ့ ဝတ်ထုကို မယျခိုငျနဲ့ အငျကွငျးဟနျတို့က ဇာတျညှနျးခှဲထားပေးခဲ့ပွီး ဒါ ရိုကျတာ အောငျဇျောလငျးက ရိုကျကူးပုံဖျောပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကားထဲမှာတော့ ဝါရငျ့သရုပျဆောငျမငျးသားမငျးသမီး ၂ ဦးဖွဈကွတဲ့ နတေိုး၊ အိန်ဒွာကြျောဇငျတို့နဲ့အတူ သရုပျဆောငျသဈ မတေိုးခိုငျတို့က ခေါငျးဆောငျပါဝငျထားကွပါတယျ။
အလငျးသဈ၊ အခရာ၊ လရိပျညိုစတဲ့ အဓိက ဇာတျကောငျ ၃ ယောကျရဲ့ အခဈြ ဒရာမာဇာတျလမျးက ဘယျလိုဖွဈလာမလဲ။ သုံးပှငျ့ဆိုငျအခဈြဇာတျလမျးတပုဒျအနနေဲ့ ဖနျတီးပုံဖျောထားတဲ့ ဒီကားထဲမှာ ဘယျလိုအပွိုငျကွဲ သရုပျဆောငျထားကွမလဲဆိုတာ ကိုတော့ ပရိသတျတှကေ မကွာခငျမှာ ရှုစားကွရတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
ရူးအောငျခဈြမယျ့လူရုပျရှငျကားရဲ့ အထူးပှဲပွသမှုကိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာ လ ရကျနကေ့ ၈ ရကျနကေ့ ရနျကုနျမွို့၊ သမ်မတရုပျရှငျရုံမှာ ပွုလုပျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
နတေိုးနဲ့ အိန်ဒွာကြျောဇငျတို့ဟာ အတှဲညီပွီး သရုပျဆောငျကောငျးသူတှဖွေဈကွ တာမို့ ဒီရုပျရှငျကားဟာ ရုံမတငျခငျကတညျးက နာမညျကွီးနခေဲ့ပွီး ဖစျေ့ဘှတျချပျေါမှာ တော့ လတျတလောအခြိနျထိ ရုပျရှငျကား Trailer ကို ဝငျရောကျကွညျ့ရှုကွတဲ့ အကွိမျ ရေ ၄ သနျးကြျော ရှိနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကားကိုတော့ လာမယျ့ စကျတငျဘာလ ၁၂ ရကျနမှေ့ာ ရုံတငျပွသတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
မူဗီခရဇေီတှကေို ဒီတခါ မိတျဆကျပွောပွပေးခငျြတဲ့ ရုပျရှငျကတော့ ပရိသတျ တှေ စိတျဝငျစားကွမယျ့ ထူးထူးခွားခွားဖွဈရပျမှနျ ရုပျရှငျကားတကားဖွဈတဲ့ The Cave !
ဒီကားရဲ့ နာမညျကိုတော့ အင်ျဂလိပျဘာသာနဲ့ The Cave ၊ ထိုငျးဘာသာနဲ့ နနျး နှနျးလို့ အမညျပေးထားပွီး အိုငျယာလနျနှယျဖှား ထိုငျးရုပျရှငျဒါရိုကျတာ Tom Waller က ရိုကျကူးပုံဖျောပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကားကတော့ အားလုံးသိခဲ့ကွပွီးတဲ့အတိုငျး ဟိုးလေးတကွျောဖွဈခဲ့တဲ့ ထိုငျးနိုငျငံမွောကျပိုငျး လိုဏျဂူတခုထဲမှာ ပိတျမိနခေဲ့ကွတဲ့ တောဝကျအကယျဒမီ လူ ငယျဘောလုံးအသငျးဝငျ ၁၃ ဦးကို ကယျတငျနိုငျခဲ့တဲ့အကွောငျးကို ရုပျရှငျအနနေဲ့ အသကျသှငျးဖနျတီးလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
တောဝကျ အကယျဒမီ လူငယျဘောလုံးသမား ၁၂ ဦးနဲ့ နညျးပွတို့ဟာ ထိုငျး နိုငျငံမွောကျပိုငျး၊ ခငျြးရိုငျခရိုငျ၊ မယျဆိုငျမွို့က ခှနျနမျ့နနျးနှနျးလိုဏျဂူထဲမှာ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဇှနျလ ၂၃ ရကျနကေ့နေ ဇူလိုငျ ၁၀ ရကျနထေိ့ အခြိနျ ၂ ပတျကြျောကွာ ပိတျမိ နခေဲ့ကွပွီးမှ ကယျတငျနိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံ အစိုးရတာဝနျရှိသူတှအေပါအဝငျ ကယျဆယျရေးအဖှဲ့တှရေဲ့ ဇှဲ၊ လုံ့ လနဲ့ ကွိုးစားအားထုတျမှုတှေ၊ ဂူတှငျးပိတျမိကလေးငယျတှနေဲ့ သူတို့မိဘတှကွေား မြှျောလငျ့ခကျြတှနေဲ့အတူ စှနျ့စှနျ့စားစားကယျတငျခဲ့ရတာတှကေို ဒီကားထဲမှာ ဘယျ လိုပုံဖျောဖနျတီးထားမလဲဆိုတာကိုတော့ မကွာခငျမှာ ပရိသတျတှကေ ရှုစားကွရတော့ မှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကားရဲ့ ဒါရိုကျတာ Waller ကတော့ ဖွဈစဉျမှာ ကနဦး ပါဝငျခဲ့သူတှေ၊ မ ဖျောကြူးရသေးတဲ့ သူရဲကောငျးတှအေနနေဲ့ ရုပျရှငျကို အဓိကထား ရိုကျကူးသှားမယျလို့ ပွောခဲ့ပွီး ဆငျဆာကိစ်စတှေ၊ မူပိုငျခှငျ့ဆိုငျရာကိစ်စရပျတှအေပွငျ ဒီအဖွဈအပကျြ ဇာတျ လမျးမှာ ပါဝငျသူတှကွေား ရုပျရှငျရိုကျကူးရတာ တကယျ့အိပျမကျဆိုးတခုလိုပဲလို့ ပွော ခဲ့တာပါ။
ဒီကားထဲမှာ အဓိက သရုပျဆောငျတှအေနနေဲ့ Ron Smoorenburg၊ Kelly B. Jones ၊ Nirut Sirichanya ၊ Eoin O’Brien ၊ Valerie Bentson စတဲ့ သရုပျဆောငျတှေ က ပါဝငျထားကွတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကား Trailer ဟာ စကျတငျဘာလ ၄ ရကျနမှေ့ာ ထှကျရှိလာခဲ့တာဖွဈပွီး လတျတလောမှာတော့ ပရိသတျတှကွေားမှာ စိတျဝငျစားမှုတှေ မွငျ့တကျနခေဲ့တာ ဖွဈ ပါတယျ။
လတျတလောမှာတော့ ဒီရုပျရှငျကားကို လနျဒနျရုပျရှငျပှဲတျောမှာ လာမယျ့ အောကျတိုဘာလ ၂ ရကျနမှေ့ာ ပှဲဦးထှကျပွသဖို့ စီစဉျထားပွီး တခွားနိုငျငံတကာ ရုပျ ရှငျပှဲတျောတှမှောပါ ပွသသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ကွာမွငျ့ခြိနျ ၁၀၄ မိနဈရှိတဲ့ ဒီရုပျရှငျကားကိုတော့ လာမယျ့ နိုဝငျဘာလ ၂၈ ရကျနမှေ့ာတော့ ထိုငျးနိုငျငံတဝှမျးရုပျရှငျရုံတှမှော ရုံတငျပွသတော့မှာ ဖွဈတယျလို့ ကွေ ငွာထားပါတယျ။
မူဗီခရဇေီတှကေို နောကျဆုံးမိတျဆကျပွောပွပေးခငျြတဲ့ ရုပျရှငျကတော့ ကိုရီး ယားနဲ့ မွနျမာအနုပညာရှငျတှေ ပူးပေါငျးရိုကျကူးထားတဲ့ ရုပျရှငျ-တနျဖိုး !
ဒီကားကိုတော့ Hkakabo Razi Pictures ရုပျရှငျထုတျလုပျရေးက ထုတျလုပျ လိုကျတာဖွဈပွီး ဒါရိုကျတာ ဂြှနျလရျောက ရိုကျကူးပုံဖျောပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
တနျဖိုးရုပျရှငျကားထဲမှာတော့ လူငယျတှရေဲ့ဘဝ၊ လူငယျတှရေဲ့ခံစားခကျြတှနေဲ့ လူငယျတှကွေားမှာ ဖွဈပကျြနတေဲ့ အကွောငျးအရာတှကေိုအခွခေံပွီး ရိုကျကူးထားခဲ့ တာပါ။
ဒီနခေ့တျေမှာလူငယျတှဟော မူးယဈဆေးဝါးရဲ့သားကောငျတှေ ဖွဈလာကွတဲ့အ တှကျ မူးယဈဆေးဝါးသုံးစှဲတဲ့လူငယျတှကေို လမျးမှား မရောကျဖို့နဲ့ လူငယျတှအေနနေဲ့ ကိုယျ့တနျဖိုးကို ကိုယျနားလညျသိရှိဖို့ သတငျးစကားပါးတဲ့အနနေဲ့ ဇာတျကားကို ဖနျတီး ထားတာလို့ သိရပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကားရဲ့ အထူးပှဲပွသမှုကိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလ ၄ ရကျနကေ့ ရနျကုနျမွို့၊ Junction City ရုပျရှငျရုံမှာ ပွုလုပျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကားထဲမှာတော့ မွနျမာနာမညျကွီး သရုပျဆောငျမငျးသားမငျးသမီးတှေ ဖွဈကွ တဲ့ ရနျအောငျ၊ ထှနျးထှနျး၊ ဇငျဝိုငျး၊ အေးမွတျသူ၊ မို့မို့မွငျ့အောငျ၊ ခငျဇာခွညျကြျောနဲ့ တခွားသရုပျဆောငျတှလေညျး အမြားကွီး ပါဝငျထားကွတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရုပျရှငျကား Trailer ဟာ လတျတလောအခြိနျထိ ဖစျေ့ဘှတျချပျေါမှာ ဝငျ ရောကျကွညျ့ရှုကွတဲ့ အကွိမျရေ သနျးနဲ့ခြီ ရှိနခေဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကားကိုတော့ လာမယျ့ စကျတငျဘာလ ၁၂ ရကျနမှေ့ာ ရုံတငျပွသတော့မှာ ဖွဈ ပါတယျ။
Movie Crazy-DVB အစီအစဉျကို အပတျစဉျ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ညတိုငျး ၇.၄၅ နာရီ၊ ၁၀.၄၅ နာရီတှမှော DVB TV channel ကနေ ပုံမှနျတငျဆကျပေးနတောဖွဈပွီး မ ကွညျ့ရှုလိုကျရသူတှအေတှကျ ကွာသပတေးနမေ့နကျ ၉.၁၅ နာရီ၊ နလေ့ညျ ၁၂.၄၅ နာရီ၊ ၃.၁၅ နာရီ၊ သောကွာနေ့ နလေ့ညျ ၂.၄၅ နာရီ၊ စနနေေ့ မနကျ ၁၁.၄၅ နာရီနဲ့ တ နင်ျလာနမေ့နကျ ၉.၄၅ နာရီတို့မှာ ပွနျလညျ ထုတျလှငျ့ပွသပေးနတော ဖွဈပါတယျ။
ဒီအစီအစဉျမှာ Movie Crazy တှအေတှကျ နိုငျငံတကာနဲ့ မွနျမာရုပျရှငျကား တှေ အကွောငျးကို ကောငျးနိုးရာရာ ရှေးခယျြတငျဆကျပေးနတောဖွဈပွီး Movie Crazy-DVB ဆိုတဲ့ Facebook စာမကျြနှာကနတေဆငျ့လညျး Like, Share နဲ့ Comment တှပေေးပွီး တော့ အားပေးနိုငျပါတယျ။
ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတို့အတွက် ဘယ်ရုံမှာ ဘာကားတွေပြနေသလဲ(ရုပ်သံ)
အပတ်စဉ်ပုံမှန်တင်ဆက်နေကျဖြစ်တဲ့ Movie Crazy အစီအစဉ်ကနေ မြန်မာနိုင် ငံနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ ရုံတင်ပြသတော့မယ့်၊ ရုံတင်ပြသနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကောင်းနိုးရာရာ ရုပ် ရှင်ဇာတ်ကားတွေ အကြောင်းကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ပူလစ်ဇာ ဆုရ စာအုပ်တအုပ်ကို ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ ရိုက်ကူးပုံဖော်လိုက်တဲ့ The Goldfinch !
ဟောလိဝုဒ် ဒရာမာအမျိုးအစားရုပ်ရှင် ပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့ကြမယ့် ဒီ ကားကိုတော့ Warner Bros. Pictures ကနေ ဖြန့်ချိသွားမှာဖြစ်ပြီး အိုင်းရစ်ခ်ျ ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ John Crowley က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာပါ။
ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပူလစ်ဇာဆုရ အမေရိကန်စာရေးဆရာ Donna Tartt ရဲ့ The Goldfinch စာအုပ်ကို ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ The Goldfinch ဆိုတဲ့ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို အကြောင်းပြုပြီး နယူးယောက်-မန်ဟက်တန်မှာ နေထိုင်တဲ့ လူငယ်တယောက်ရဲ့ ဘဝအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားတဲ့ အ တွေ့အကြုံနဲ့ ဘဝအပေါ် အနုပညာရဲ့ သက်ရောက်ပုံတွေ ရေးဖွဲ့ထားတာပါ။ Theo ဆိုတဲ့ အဲဒီလူငယ်လေးရဲ့ ဘဝနောက်ကြောင်းကတော့ သူ့ရဲ့ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာ မက်ထရိုပိုလီတန်အနုပညာပြတိုက် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမှာ မိခင်ဖြစ်သူကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ သူ့ရဲ့ ဘဝဟာ တကယ့်ကို ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ ဒီနောက်မှာ မိခင်အတွက် အမှန်တရားကို ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ၊ ဘယ်လိုချိတ် ဆက်မှုတွေနဲ့ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားမလဲဆိုတာကို ဒီကားထဲမှာ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီး တွေဖြစ်ကြတဲ့ Ansel Elgort ၊ Sarah Paulson ၊ Luke Wilson ၊ Jeffrey Wright ၊ Nicole Kidman ၊ Ashleigh Cummings စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ် ပါတယ်။
IMDb မှာ Rating 6.7 အထိ ရရှိထားခဲ့တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကို နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ပွဲ တော်တခုဖြစ်တဲ့ Toronto International Film Festival မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့က ပြသခဲ့ပြီး ချီးကျူးမှုတွေလည်း ရရှိထားပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ တချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းမြင်ကွင်းတွေ၊ ပြကွင်းပြကွက်တွေ၊ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၇ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ Restricted R အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဘတ်ဂျက်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၄၀ အကုန်အကျခံရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင် ကားကိုတော့ Box Office မှာ ရုံတင်ပြသမယ့် ပထမသီတင်းပတ်မှာတင် ဝင်ငွေအမေရိ သန်ဒေါ်လာ ၈ သန်းကနေ ၁၂ သန်းကြား ရရှိနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ကြာမြင့်ချိန် ၁၄၉ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ လာမယ့် စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ဝါရင့်အဆိုတော် သ ရုပ်ဆောင်မင်းသမီး ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်နဲ့ အာရှနွယ်ဖွားသရုပ်ဆောင်မင်းသမီး ကွန်းစတန့်ဝူ တို့ ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြတဲ့ Hustlers !
ဖြစ်ရပ်မှန်ဒရာမာဇာတ်မြူးရုပ်ရှင်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ အမေ ရိကန်အမျိုးသမီး ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Lorene Scafaria က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပြီး STX Films ကနေ ဖြန့်ချိပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က နာမည်ကျော် နယူးယော့ခ်မဂ္ဂဇင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးရှင် Jessica Pressler ရဲ့ “The Hustlers at Scores” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ အသက်သွင်းပုံဖော်လိုက်တာပါ။
၂၀၀၀ ပြည့်လွန်ကာလတွေတုန်းက နယူးယော့ခ်စီးတီးမှာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ တိုင်းတပါးမှ အမျိုးသမီးအကအဖွဲ့တခုဟာ သူတို့အပေါ် ငွေကြေး၊ အရက်တို့ကြောင့် နှိပ် စက်အနိုင်ကျင့်ခဲ့ကြတဲ့ ငှားရမ်းသူ သူဌေးတွေဆီကနေ ဘဏ်ခရက်ဒစ်ကတ်တွေ ယူ ဆောင်ခဲ့ကြပြီး ကလဲ့စားချေကြတဲ့အကြောင်းတွေကို ဇာတ်အိမ်တည်ရိုက်ကူးထားခဲ့တာ ပါ။
စွဲမက်ဖွယ် ကောက်ကြောင်းနဲ့ ညှို့အားပြင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆိုတော် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်နဲ့ မကြာသေးခင်ကမှ Crazy Rich Asians ရုပ် ရှင်ကားနဲ့ အောင်မြင်လာခဲ့သူ အာရှနွယ်ဖွားသရုပ်ဆောင်မင်းသမီး ကွန်းစတန့်ဝူတို့ရဲ့ ခုလိုပေါင်းစည်းမှုဟာ ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
ဒီကားထဲမှာ သူတို့ ၂ ဦးအပြင် တခြားဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Julia Stiles၊ Keke Palmer ၊ Lili Reinhart ၊ Lizzo နဲ့ အဆိုတော် Cardi B စတဲ့ သ ရုပ်ဆောင်တွေလည်း ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့ အထူးပွဲပြသမှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တခုဖြစ်တဲ့ Toronto International Film Festival မှာ ပြု လုပ်ခဲ့ပြီး ချီးကျူးမှုတွေလည်း ရရှိထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ ဘတ်ဂျတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၂၀ နဲ့ ၃၀ ကြား အ ကုန်အကျခံ ရိုက်ကူးထားပြီး Box Office မှာတော့ ရုံတင်ပြသမယ့် ပထမ သီတင်းပတ် မှာတင် ဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၄ သန်းကနေ ၂၆ သန်းကြား ရရှိနိုင်မယ်လို့ ခန့် မှန်းထားပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဖော်အချွတ်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ၊ ပြ ကွင်းပြကွက်တွေနဲ့ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၇ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူ ခွင့် ပြုချက်နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ Restricted R အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ယူကျုဘ်ပေါ်မှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ဟာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အ ကြိမ်ရေ သန်းနဲ့ချီ ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေခဲ့တာပါ။
ကြာမြင့်ချိန် မိနစ် ၁၁၀ ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ မြန်မာအချစ်ဒရာမာ ရုပ် ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ ရူးအောင်ချစ်မယ့်လူ !
ဒီကားကိုတော့ ရွှေစင်ဦး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး လွန်းထားထားရဲ့ ဝတ္ထုကို မယ်ခိုင်နဲ့ အင်ကြင်းဟန်တို့က ဇာတ်ညွှန်းခွဲထားပေးခဲ့ပြီး ဒါ ရိုက်တာ အောင်ဇော်လင်းက ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီး ၂ ဦးဖြစ်ကြတဲ့ နေတိုး၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့နဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်သစ် မေတိုးခိုင်တို့က ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြပါတယ်။
အလင်းသစ်၊ အခရာ၊ လရိပ်ညိုစတဲ့ အဓိက ဇာတ်ကောင် ၃ ယောက်ရဲ့ အချစ် ဒရာမာဇာတ်လမ်းက ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။ သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းတပုဒ်အနေနဲ့ ဖန်တီးပုံဖော်ထားတဲ့ ဒီကားထဲမှာ ဘယ်လိုအပြိုင်ကြဲ သရုပ်ဆောင်ထားကြမလဲဆိုတာ ကိုတော့ ပရိသတ်တွေက မကြာခင်မှာ ရှုစားကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရူးအောင်ချစ်မယ့်လူရုပ်ရှင်ကားရဲ့ အထူးပွဲပြသမှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ လ ရက်နေ့က ၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နေတိုးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ဟာ အတွဲညီပြီး သရုပ်ဆောင်ကောင်းသူတွေဖြစ်ကြ တာမို့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ ရုံမတင်ခင်ကတည်းက နာမည်ကြီးနေခဲ့ပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ တော့ လတ်တလောအချိန်ထိ ရုပ်ရှင်ကား Trailer ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ် ရေ ၄ သန်းကျော် ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို ဒီတခါ မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ပရိသတ် တွေ စိတ်ဝင်စားကြမယ့် ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ရပ်မှန် ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ The Cave !
ဒီကားရဲ့ နာမည်ကိုတော့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ The Cave ၊ ထိုင်းဘာသာနဲ့ နန်း နွန်းလို့ အမည်ပေးထားပြီး အိုင်ယာလန်နွယ်ဖွား ထိုင်းရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Tom Waller က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားကတော့ အားလုံးသိခဲ့ကြပြီးတဲ့အတိုင်း ဟိုးလေးတကြော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း လိုဏ်ဂူတခုထဲမှာ ပိတ်မိနေခဲ့ကြတဲ့ တောဝက်အကယ်ဒမီ လူ ငယ်ဘောလုံးအသင်းဝင် ၁၃ ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ အသက်သွင်းဖန်တီးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တောဝက် အကယ်ဒမီ လူငယ်ဘောလုံးသမား ၁၂ ဦးနဲ့ နည်းပြတို့ဟာ ထိုင်း နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ ချင်းရိုင်ခရိုင်၊ မယ်ဆိုင်မြို့က ခွန်နမ့်နန်းနွန်းလိုဏ်ဂူထဲမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့ကနေ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်နေ့ထိ အချိန် ၂ ပတ်ကျော်ကြာ ပိတ်မိ နေခဲ့ကြပြီးမှ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအပါအဝင် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ ဇွဲ၊ လုံ့ လနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေ၊ ဂူတွင်းပိတ်မိကလေးငယ်တွေနဲ့ သူတို့မိဘတွေကြား မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့အတူ စွန့်စွန့်စားစားကယ်တင်ခဲ့ရတာတွေကို ဒီကားထဲမှာ ဘယ် လိုပုံဖော်ဖန်တီးထားမလဲဆိုတာကိုတော့ မကြာခင်မှာ ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရတော့ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့ ဒါရိုက်တာ Waller ကတော့ ဖြစ်စဉ်မှာ ကနဦး ပါဝင်ခဲ့သူတွေ၊ မ ဖော်ကျူးရသေးတဲ့ သူရဲကောင်းတွေအနေနဲ့ ရုပ်ရှင်ကို အဓိကထား ရိုက်ကူးသွားမယ်လို့ ပြောခဲ့ပြီး ဆင်ဆာကိစ္စတွေ၊ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအပြင် ဒီအဖြစ်အပျက် ဇာတ် လမ်းမှာ ပါဝင်သူတွေကြား ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရတာ တကယ့်အိပ်မက်ဆိုးတခုလိုပဲလို့ ပြော ခဲ့တာပါ။
ဒီကားထဲမှာ အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ Ron Smoorenburg၊ Kelly B. Jones ၊ Nirut Sirichanya ၊ Eoin O’Brien ၊ Valerie Bentson စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ က ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ဟာ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး လတ်တလောမှာတော့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ မြင့်တက်နေခဲ့တာ ဖြစ် ပါတယ်။
လတ်တလောမှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကို လန်ဒန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ လာမယ့် အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာ ပွဲဦးထွက်ပြသဖို့ စီစဉ်ထားပြီး တခြားနိုင်ငံတကာ ရုပ် ရှင်ပွဲတော်တွေမှာပါ ပြသသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကြာမြင့်ချိန် ၁၀၄ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့မှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံတဝှမ်းရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကြေ ငြာထားပါတယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ကိုရီး ယားနဲ့ မြန်မာအနုပညာရှင်တွေ ပူးပေါင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်-တန်ဖိုး !
ဒီကားကိုတော့ Hkakabo Razi Pictures ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ထုတ်လုပ် လိုက်တာဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ ဂျွန်လရော်က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တန်ဖိုးရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ လူငယ်တွေရဲ့ဘဝ၊ လူငယ်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ လူငယ်တွေကြားမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုအခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားခဲ့ တာပါ။
ဒီနေ့ခေတ်မှာလူငယ်တွေဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးရဲ့သားကောင်တွေ ဖြစ်လာကြတဲ့အ တွက် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲတဲ့လူငယ်တွေကို လမ်းမှား မရောက်ဖို့နဲ့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ်နားလည်သိရှိဖို့ သတင်းစကားပါးတဲ့အနေနဲ့ ဇာတ်ကားကို ဖန်တီး ထားတာလို့ သိရပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့ အထူးပွဲပြသမှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ Junction City ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ မြန်မာနာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတွေ ဖြစ်ကြ တဲ့ ရန်အောင်၊ ထွန်းထွန်း၊ ဇင်ဝိုင်း၊ အေးမြတ်သူ၊ မို့မို့မြင့်အောင်၊ ခင်ဇာခြည်ကျော်နဲ့ တခြားသရုပ်ဆောင်တွေလည်း အများကြီး ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ဟာ လတ်တလောအချိန်ထိ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ ဝင် ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ သန်းနဲ့ချီ ရှိနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားကိုတော့ လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ် ပါတယ်။
Movie Crazy-DVB အစီအစဉ်ကို အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညတိုင်း ၇.၄၅ နာရီ၊ ၁၀.၄၅ နာရီတွေမှာ DVB TV channel ကနေ ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး မ ကြည့်ရှုလိုက်ရသူတွေအတွက် ကြာသပတေးနေ့မနက် ၉.၁၅ နာရီ၊ နေ့လည် ၁၂.၄၅ နာရီ၊ ၃.၁၅ နာရီ၊ သောကြာနေ့ နေ့လည် ၂.၄၅ နာရီ၊ စနေနေ့ မနက် ၁၁.၄၅ နာရီနဲ့ တ နင်္လာနေ့မနက် ၉.၄၅ နာရီတို့မှာ ပြန်လည် ထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်မှာ Movie Crazy တွေအတွက် နိုင်ငံတကာနဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်ကား တွေ အကြောင်းကို ကောင်းနိုးရာရာ ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး Movie Crazy-DVB ဆိုတဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေတဆင့်လည်း Like, Share နဲ့ Comment တွေပေးပြီး တော့ အားပေးနိုင်ပါတယ်။
Previous story ထိုငျးနိုငျငံရှိ ပိုငျရှငျမဲ့ မွနျမာအလောငျး ၆၀၀ ခနျ့ကို ပွနျလညျတောငျးခံနိုငျ
Next story လှတျတျောဒုဥက်ကဋ်ဌဟောငျး ဦးစံမငျးအောငျ၏ ကနျြးမာရေးအာမခံလြှောကျထားမှု ဆရာဝနျတဦးကို စဈဆေး